Akụkọ - Na mgbakwunye na ọnụahịa, olee ihe ndị ọzọ a ga-atụle mgbe ị na-azụ jammer mgbaama?
Mkpọrọ Jamming usoro
Ime Meetlọ Nzukọ Nzukọ Cell ekwentị Jammer
Ala Frequency Radio Signal Jammer
Aka mgba aka-Jammer
Portable Ike bombu Signal Jamming System
Nzute ime ụlọ Cell ekwentị Jamming Ngwọta
Nnukwu Mkpọrọ Mkpọrọ Jamming Ngwọta
Full Band High ike Vehicle Jamming usoro
Sclọ Ọrụ Nrụpụta
Na mgbakwunye na ọnụahịa, olee ihe ndị ọzọ a ga-atụle mgbe ị na-azụ jammer mgbaama?
Ndewo, bia gwaa ngwa ahia anyi!
Ihe ndị ekwesiri ịtụle na nhọrọ nke akara ngosi ekwentị mkpanaka:
Nhọrọ nke akara ngosi ekwentị mkpanaaka dị mma maka gị. Atụkwasịla ụdị ọ bụla buru ibu obi. Ọnụahịa abụghị isi ihe. Ma ekwentị mgbaàmà jammer ruru eru nwere ike ịhụ site na ụlọ ọrụ dị iche iche asambodo, ihe eji, na debugging nhazi technology. Enwere ụfọdụ ihe achọrọ maka nhọrọ nke akara ngosi ekwentị mkpanaaka. Ọ bụrụ na enwere ndebanye aha ụlọ ọrụ, ma enwere ụghalaahịa edenyere aha, wdg, ịnwere ike ịjụ onye nrụpụta ka o nye akara ngosi ekwentị mkpanaka jammer debugging, foto dị n'ime ya, wdg. Niile na-ekpe ikpe mgbaama ekwentị mkpanaaka . Site na foto nbipu, enwere ike ihu ma ugboro nke ihe ngosi ekwenti mkpanaka di n’akuku ma nwekwaa ogbi, ma ikike nbughari ugboro ole ruru eru, o bu eziokwu na enwere uzo 5 na nputaputa 8 n’èzí, ma ya achọpụtara na ọtụtụ ndị ahịa na-enweghị isi n’ahịa na-adọta ndị ahịa na ọnụ ala dị ala. N'ụzọ dị otú a, site na usoro ndị a dị n'elu, ọ dịkarịa ala enwere ike ikpe ya na anaghị emepụta ya na obere ụlọ ọrụ na obere ụlọ ọrụ, yana ogo dịtụ nkwa.
Etu iji tụnyere ọrụ ihe nchebe ihe nchebe:
Ọ bụrụ n’ịzụta ihe nrịba ama nke ekwentị mkpanaaka, ịnwere ike iji ya tụnyere akụkụ na ọrụ nke data debugging iji hụ ma ị nwere ike ichebe CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G / 4G mgbaàmà ekwentị mkpanaaka na-echekwa na akara ngosi igwe niile. Ma ọwa ọ bụla nwere ikike ike zuru oke, n'ezie, ka ọwa ndị ọzọ na-apụta, ọ ka mma ọta mkpuchi. Iswa sara mbara, ndị na-ahụ maka nkwukọrịta na mba ọ bụla dịkwa iche, na usoro ntanetị a nakweere na mpaghara dị iche iche dịkwa iche. Maka ndị ahịa ahụ n'onwe ha, ha kwesịrị ịma ebe anyị kwesịrị iji akụrụngwa yana mmetụta ọ dị anyị mkpa iji nweta, wee chọta onye nrụpụta akụrụngwa ọkachamara iji kwado gị ngwa ọrụ na-akwado ya dị ka ebe eji yana mba eji eme ihe.
Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ahịa na ụlọ ọrụ ọta na-arụ ọrụ ezighi ezi. Site na izu ohi na ịgbanwe posts, iji adịgboroja, ibelata ike, ụgha okwu, wdg, ọnụahịa nke akụrụngwa bụ naanị ntụnye, ọ bụghị nke dị oke ọnụ karịa. Ọ ka mma ịhọrọ ndị nrụpụta ọkachamara nwere ike ịnye ọrụ ogologo oge ahịa ahịa. Ahịa na-abụ uche mgbe ụfọdụ, ọ bụghị ngwaahịa. Ihe bara uru nke onwe ya.
Post oge: Ọkt-17-2020
Mpaghara Quanxinyuan Industrial, Huafan Road, Dalang, Longhua, Shenzhen